Mustafe Cagjar Oo Shaaciyey Cidda Ka Dambeysa Inay Ciidamo U Diraan Ti...
Mustafe Cagjar oo shaaciyey cidda ka dambeysa inay ciidamo u diraan Ti…
Jigjiga (Wararka Maanta) – Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) ayaa markii u horeysay sharaxaad dheeraad ah ka bixiyey ciidamada uu maamulkiisa u diray gobolka Tigray, si ay qeyb uga noqdaan dagaalka ay xukuumadda Abiy Ahmed kula jirto TPLF.
Mustafe Cagjar oo wareysi siiyey idaacada BBC-da ayaa sheegay in maamulkiisa uu ciidamada ugu diray Tigray kadib dalab uga yimid ra’iisal wasaare Abiy, oo dhigayay in dowlad deegaanada kala qeyb qaataan dagaalka TPLF.
“Tagintaankooda (Ciidamada) waxay la xiriirta baaq ka yimid dowladda dhexe, gaar ahaan ra’iisul wasaaraha ee ahaa in laga qeyb qaato difaaca guud ee looga hortagayo kooxda argagixisada ee TPLF oo qorshaheedu yahay inay dumiso nidaamka hadda jira,” ayuu yiri.
Wararka Maanta : Raysal wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay Jadwalka ay soo saareen Guddiga...
Sidoo kale waxa uu sheegay in dirista ciidamada uu kala tashaday dhinacyo badan oo ah kuwii ay khuseysay ee deegaanka, islamarkaana ay ayagu fuliyeen ka maamul ahaan, sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweyne Cagjar ayaa eedeyn culus u jeediyay dadka ka horyimid in deegaanka Soomaalida uu qeyb ka noqdo dagaalka qaraar ee Tigray, kuwaasi oo uu ku tilmaamay “inay yihiin kuwo taageersan TPLF”.
“Dadka noocaasi ah waxay isugu jiraan kuwa TPLF taageersan oo ah kuwa mar walba waxa ay TPLF tiraahda ku hadla, iyo kuwa kale oo daacad ah oo wadaniyiin ah inta badan ku qaldama dhibaatada socota.”
“Kooxda TPLF taageerta ee Soomaalida ee kuwii deegaanka maamuli jiray iyo kuwa la mid ah waxay aad u jecel yihiin in arrintan ay ka dhigaan mid u dhaxeysa Amxaaro iyo Tigray. Qaabka ay u dhigayaan waa midka Tigray-gu jecel yihiin in loo dhigo.”
Waxa uu meesha ka saaray aragtida ah in dagaalka Tigray uu ka dhaxeeyo xukuumadda Abiy iyo TPLF, isagoona sheegay in dagaalkaas uu yahay mid u dhaxeeya dowladda dhexe ee Itoobiya iyo ururka TPLF oo xiligan urur argagixiso looga aqoonsan yahay dalkaas.
Ugu dambeyniinta waxa uu sheegay in ciidanka uu maamulkiisa diray aysan wax u dhimi doonin howlihii amni ee ay ka hayeen maamulka, islamarkaana ay yihiin ciidan deegaanka uga dhex muuqan doona howlaha qaran ee ka socda Tigray, sida uu hadalka u dhigay.
Wararka Maanta : Qaxooti Soomaali ah oo dalka Uganda ugu geeriyooday Gaajo iyo COVID-19...
Hadalka madaxweyne Cagjar ayaa imanaya xili ay hadal hayn badan ka dhalatay ciidamo uu maamulkiisu u diray Tigray, si ay qeyb uga noqdaan dagaalka ay dowladda dhexe ka wado gobolkaas, xili uu galay waji aad u qaraar.
Ogeysiis muhiim ah: Deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom
Wararka Maanta : Macalimuu: Gedo waxaan geynay balaayo, Kullane Jiis in la maxkamadeeyo...
Wararka Maanta : Cumar Filish oo weerar culus ku qaaday mid ka mid ah wasaaradaha dowla...
Wararka Somali18 mins ago